हामी विवेकहीन आँधीमा किन मिसिनु ? « ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal
हामी विवेकहीन आँधीमा किन मिसिनु ?
नेपाल सरकारको पछिल्लो निर्णयले नेपालको नक्सामै भएपनि भूगोल नै परिवर्तन भएको छ । तर नेपालबाट निस्कने केही दैनिक पत्रिकाले त्यो नयाँ नक्सा छाप्ने लेठो गर्नुभन्दा गोदीकारितातिर लाग्नु बाञ्छनीय ठानेको त होइन भन्ने गम्भीर प्रश्न बजारमा छ । कुनै बेला नेपाल टु प्लस वानको कथित .फर्मुलाभित्र पुुगिसकेको बल लगाएर विश्लेषण गर्ने नेपालका टेलिभिजन नभएर छापा नै थिए । भारतीय च्यानल र नेपालका छापाको किन उस्तै शैली बन्दै गए होला भन्ने मलाई कहिलेकाहीं कुत्कुती लाग्दछ । कोही आजको भोलि नै भगवान भनिएको राक्षसमा परिणत हुने र राक्षस मुक्तिदाता बन्ने प्रवृत्ति नेपालको मिडियामा पनि राजनीतिमा जस्तैगरी संक्रमित हुन थाल्नु सांच्चिकै विडम्वना हो ।
भारतले र भारतीय मिडियाले आज जे गरिरहेका छन् । त्यो त उनीहरुकै सनातनी धन्दा भयो ।